အချိန်ပြစာလုံးလေးများကို Tense အမျိုးမျိုးမှာ သုံးတဲ့အခါ Tenses and the time adverbs used with them ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
Author: lu bo | 8:27 PM | No မှတ်ချက် | ‎Win Naing Oo‎ to အင်္ဂလိပ်စာစိတ်ဝင်စားသူများ
စာမေးပွဲ ဖြေကြတော့မယ့် အချိန်ဆိုတော့ သူတို့ကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ကူညီချင်တယ် ၊ ကျနော် ကိုယ်တိုင်ကျောင်းသားဘ၀တုန်းက ဒီလိုမျိုး key word လေးတွေကို ကြည့်ပြီး Tense ကို မှန်းဆဖြေဆိုခဲ့ဖူးတော့ ကိုယ်ချင်းလည်းစာမိပါတယ် ။ စကားလုံးတွေကို စုစည်းပေးရုံမျှ သာမက..ပဲနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ Tense တွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်လေးတွေကိုလည်း ရှင်းပြချင်နေခဲ့ပါတယ် ။ မေတ္တာ heart emoticon ဆိုတာ အသွင်သွင် စီးဆင်းတတ်တဲ့ သဘောသဘာဝဆိုတော့လည်း သူ့ကို ထိန်းချုပ် မထားလိုက်ချင်တာ အပြစ်မဆိုသာဘူးလို့တော့ ထင်မိပါရဲ့။
The simple present tense is commonly used
with the adverbs ALWAYS, USUALLY, SELDOM, NEVER, SOMETIMES, OFTEN, FREQUENTLY, GENERALLY, HABITUALLY, OCCASIONALLY, ONCE, TWICE, THRICE etc.
(2) Simple past tense ကတော့ ရှင်းပါတယ် အတိတ်ကိုညွှန်းဆိုတဲ့ အချိန်ပြ စကားအသုံးအနှုန်း တစ်ခုခုကို သုံးရပါတယ် ။ The simple past tense is commonly used with “time expressions referring
to the past” . Examples are: YESTERDAY, LAST YEAR, AGO, IN 2006 etc.
(2.B) စောစောက Simple present tense
နဲ့ တွဲလေ့ရှိတဲ့ frequency adverb တွေဟာ ဒီ simple past tense မှာလည်း သုံးနိုင်ပြန်ပါတယ် ။ ဒါက အတိတ်တုန်းက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အလေ့အကျင့်သဘော ၊ မှန်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့သဘော ဖြစ်ပါတယ် ၊ ခုအချိန်မှာ မှန်ချင်မှ မှန်ပါတော့မယ်..
ဒီအချက်က simple present နဲ့ ကွာတဲ့အချက်ပါ ။
The present continuous tense is used to talk about actions and situations that are in progress at the moment of speaking. The following
time expressions are commonly used with the present continuous tense: TODAY, AT PRESENT, AT THE MOMENT, STILL, NOW etc.
ကျနော် အပြင်ရောက်နေတုန်း သူမက ကျနော်နဲ့ ဖုန်းအဆက်အသွယ်ရအောင် ကြိုးစား(လုပ်ဆောင်) နေခဲ့ပါတယ် ........................................................................
The past perfect tense is not normally used alone. It is used to denote
the earlier of two past actions. We use the simple past tense for the latter action.
(ရှေ့တစ်ချိန်ချိန်က စပြီးဖတ်ခဲ့တယ် ၊ ဖတ်လို့မပြီးသေးဘူး ဖတ်နေဆဲပဲ ၊ ရလဒ်အဖြစ် စာအုပ်က ကောင်းတယ်လို့ သိရတယ် .. စတဲ့ အချက်တွေကို ဒီဝါကျကနေ သိနိုင်ပါတယ် ..................